Sooshiyaal-dimoqraadiga oo doonaya shaqaalaynta 1000 macallin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hoggaamiyaha xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadiga Stefan Löfven.
Sooshiyaal-dimoqraadiga oo doonaya shaqaalaynta 1000 macallin
La daabacay onsdag 11 september 2013 kl 16.59
Xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadigu wuxuu doonayaa in sannad walba 1000 macallin oo dheeraad ah oo dhiga dugsiyada barbaarinta ay ka soo dhammaystaan tacliinta sare. Sidaasna waxaa shaaca ka qaaday hoggaamiyaha xisbiga Stefan Löfven mar uu baarlamaanka gudahiisa khudbad ugu jeedinayey siyaasiyiinta degmooyinka.
Wuxuu xisbigu doonayaa in sannad walba miisaaniyadda looga gooyo 110 milyan oo karoon oo maalgelinayo waxbarashada 1000 macallin sannadkiiba iyo kaalmada ardayda oo ay macallimiintaasi qaadanayaan inta waxbarashada ku jiraan. Taasina waxay noqoneysaa boqolkiiba 25 oo lagu kordhinayo kkarashka tababarka macallimiinta.
Löfven wuxuu intaas ku daray dhaqaalaha waxbarashadaan lagu maalgelinayo ay ku jirto hindisaha miisaaniyadda uu xisbiga Sooshioyaal-dimoqraadigu soo bandhigayo.
Ujeeddada laga leeyahay hindisahaan ayaa ah in shaqa-la’aanta hoos loo dhigo iyo in ay carruurtu ka helaan dugsiyada barbaarinta waxbarasho tayo leh. Haddii macallimiin badan la shaqaaleeyo waxaa yaraanaaya cadadka ardayda dhigata fasalada dugsiyada barbaarinta. Taasina waa hadafka xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadigu doonayo in uu meelmariyo.